Astaamaha Gaarka ah ee WordPress
Kudar Astaamaha Gaarka ah WordPress 3
Jimco, Juun 8, 2011 Sabtida, Oktoobar 29, 2011 Douglas Karr
Bishan .wararka net la yimid qayb weyn oo ku saabsan astaamaha WordPress 3. Mid ka mid ah astaamaha ayaa ah awooda lagu badalayo muuqaalkaaga asalka ah ee mawduucaaga. Koodhku runtii waa mid fudud. Faylkaaga function.php feylkaaga, kudar sadarka soo socda:
Haddii mawduucaagu aanu lahayn faylalka function.php, hal ku dar! Waa feyl mawduuc asal ah oo WordPress uu si toos ah ugu dari doono. Natiijada la dhammeeyay ayaa ah inaad hadda leedahay ikhtiyaar menu menu ah qaybta Muuqaalka maamulka: